by McKenna मिलर
पाम वायु एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय एक चार वर्षीय, सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो। नामांकन गरेर, यो सबै चार परिसरहरु मा अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो महाविद्यालय मध्ये एक छ, एएसयू लगभग 72,000 विद्यार्थीहरु लाई समर्थन गर्दछ, जसको लगभग 60,000 को समायोजन टेम्पे, एरिजोना मा मुख्य परिसर संग छ। ASU लाई स्नातक, मास्टर, डक्टल र कानून डिग्री प्रदान गर्दछ स्कूलहरु र महाविद्यालयहरु मा। अकादमीहरू 25 देखि 1 को विद्यार्थी / संकाय अनुपात द्वारा समर्थित छन्।
माथि चित्रित पाम वाल्क हो, एक लोकप्रिय हिड्ने खजूरका पेडहरूसँग भएको छ, जसमध्ये केहि90 फिट भन्दा बढी लामो हुन्छ। यो गलियारे प्राकृतिक Tempe परिसर मा सबै भन्दा फोटो छ।
एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटीको बारेमा थप जानकारीको लागि, एएसयू प्रोफाइल जाँच गर्नुहोस् र विद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
तस्विर भ्रमण जारी राख्नुहोस् ...
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय मा पुरानो मुख्य
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालयमा पुरानो मुख्य (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: जन एम। त्वरित / फ्लिकर
परिसरमा सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ऐतिहासिक इमारत पुरानो मुख्य हो, एएसयू पूर्व छात्र संघको। पुरानो मुख्य विद्युतीय रोशनीको लागि टेम्पेमा पहिलो इमारत थियो, र यसलाई ऐतिहासिक स्थानहरूको राष्ट्रिय दर्तामा सूचीबद्ध गरिएको छ। ASU इतिहासको यो सानो टुक्रामा गर्व छ र भवन निर्माणको लागि कडा मेहनत गर्दछ।
एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी मा सौर पैनलों
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालयमा सौर प्यानलहरू (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: केन डूले / फ्लिकर
परिसर स्थिरताको क्षेत्रमा, एएसयू खेल भन्दा अगाडि रहेको छ र प्रायः देशको शीर्ष "हरियो" कलेजहरूमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छ। ASU कैम्पस मा 61,000 सौर पैनलों छ जो 15.3 मेगावाट भन्दा अधिक उत्पादन गर्दछ। मुख्य क्याम्पस र 66 सौर प्रणालीमा रहेको 59 सौर प्रणालीहरूले एएसयू ऊर्जा कुशल संग राख्न मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, कलेजले हरेक वर्ष 800 टनको पुनरावृत्तिका बारेमा सङ्कलन गर्दछ। तपाईं आधिकारिक तथ्याङ्कहरूको लागि क्याम्पसमा मेट्रोलिज्मको लागि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ, ऊर्जा उत्पादन र खपत ट्रयाकिङको लागि ASU को वेबपेज।
ASU मा Wrigley हॉल
ASU मा Wrigley Hall (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: पूर्वाधार / फ्लिकर
एएसयूका रग्ली हॉलले कलेजको स्थिरता पहलको अर्को उदाहरण हो। Wrigley Hall धेरै पुनर्नवीनीकरण सामग्री र छत जनरेट बिजुलीमा पवन टर्बाइनहरुमा बनाइएको थियो। यो विद्यालयको ग्लोबल इन्स्टीट्यूट इन्टरनेसनिटी र सिकाईपनको विद्यालय पनि हो। क्याम्पस मेट्रोलिज्म कार्यक्रमको लागि धन्यबाद तपाईंले यहाँ भवन निर्माण गरेर कति ऊर्जा प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
एरिजोना राज्य मा ईंट्री
एरिजोना स्टेटमा इन्ट्रीकर्ड (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: robynspix / फ्लिकर
शहर टेम्पेमा स्थित, ईटायू स्कूल अफ आर्ट्स, मिडिया र इन्जिनियरिङ, साथै अनुसन्धान केन्द्र जस्ता स्थानिय अनुसन्धानका लागि साझेदारी सम्बन्धी कार्यक्रम (PRISM), एरिजोना टेक्नोलोजी इन्टरप्राइजेज (एजीटेई), र संज्ञानात्मक निर्दोष कम्प्युटिंगको केन्द्र (CUbiC) को सुविधा प्रदान गर्दछ। )।
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय मा हेडडे लाइब्रेरी
एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी मा हेडडे लाइब्रेरी (विस्तार गर्न फोटो क्लिक गर्नुहोस)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
चार्ल्स Trumbull हेडन पुस्तकालय को टेम्पा को संस्थापक को लागि नाम दिइएको छ, र इमारत को एक ASU लाइब्रेरी सिस्टम को एक व्यापक भाग हो। कुल मिलाएर, एएसयू लाइब्रेरीहरूमा लगभग5लाख पुस्तकहरू छन् साथै 300,000 ई-पुस्तकहरू र 78,000 इजाजतहरूमा पहुँच छन्। पुस्तकालयलाई चित्रकलाको रुपमा यो रूपमा बगैंचा आंगन र एक उज्ज्वल विद्यालय ल्याण्डमार्कको रूपमा "ज्ञानको बेकन" नामक छ।
एरिजोना स्टेटमा मेमोरियल युनियन
एरिजोना राज्यमा मेमोरियल युनियन (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: robynspix / फ्लिकर
800+ विद्यार्थी क्लबहरू र संस्थाहरू मध्ये एकमा सामेल हुन खोज्नेहरूका लागि, एक भाइरस वा बिगबिगी, वा विद्यार्थी सरकार, मेमोरियल युनियन जाने स्थान हो। मेमोरियल युनिभर्सले पट टिलम्यान दिग्गज सेन्टर र सूर्य शैतानको विकास केन्द्र, साथसाथै एक विद्यार्थी मनोरञ्जन केन्द्र स्पार्कीको डेन भनिन्छ।
एयुयू मा पाइपर लेखक हाउस
एयूयू मा पाइपर राइटर्स हाउस (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
क्रिएटिव लेखकहरूले वर्जिन राष्ट्रपतिको कटेजमा वर्जीनिया जी। पाइपर राइटर्स हाउसमा घर फर्किनेछन्। त्यहाँ तपाईं वर्जीनिया जी पाइपर केन्द्र रचनात्मक लेखनको साथ साथै कक्षाघर, एक पुस्तकालय, र लेखकको बगैचा पाउन सक्नुहुन्छ। इमारत ऐतिहासिक स्थानहरु को राष्ट्रीय रजस्टर मा छ र रबर्ट फ्रस्ट द्वारा दुई पल्ट भ्रमण गरिएको थियो।
एएसयू फल्टन सेन्टर
एटीयूमा फल्टन सेन्टर (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: समुद्री यात्री / फ्लिकर
एएसयू फाउण्डेशनले 2005 मा आधुनिक फल्टन सेन्टरको निर्माण गर्यो, र यसले विश्वविद्यालय प्रशासन, लिबरल आर्ट्स र साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, र फाउन्डेशनका लागि पहिले नै गरेको छ। 1955 देखि, एएसयू फाउण्डेशन एक गैर-लाभकारी संस्था हो जुन कलेजको लागि दानलाई सँभाल्छ।
एएसयू गामाज (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: निक बास्टियन / फ्लिकर
एएसयू गामेम्स एक प्रदर्शन कला केन्द्र र सम्पूर्ण समुदाय को लागि एक लोकप्रिय स्थान हो। ग्रैमेज विशेषताहरू डान्सरहरू, संगीतकारहरू, र कलाकारहरू दुवै कलेज र विश्वभरका कलाकारहरूबाट। भवनको वास्तुकला उल्लेखनीय छ - यो फ्रैंक लयड राइट द्वारा डिजाइन गरिएको थियो।
एरिजोना राज्य मा निर्णय थिएटर
एरिजोना राज्यमा निर्णय थिएटर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: robynspix / फ्लिकर
एएसयू निर्णय थियेटर टेक्नोलोजी ठाँउ हो र वैज्ञानिक रूपमा सहयोगी निर्णयको लागि डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरूका एक-दयालु "सात स्क्रीन इमर्सिभ वातावरण" ले निर्णय निर्माहरूलाई डाटाको जटिल सेटहरू विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। निर्णय थियेटरको अभिनव डिजाइन सहयोगी निर्णय प्रक्रियाहरूमा महत्वपूर्ण प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
ASU नेल्सन फाइन आर्ट्स सेन्टर
ASU नेल्सन फाइन आर्ट्स सेन्टर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
ASU परिसरमा कुनै कलाकार वा कला प्रेमीहरू नेल्सन फाइन आर्ट्स सेन्टरको भ्रमण गर्न निश्चित हुनुपर्दछ। यो केन्द्रमा एएसयू कला संग्रहालय र गल्विन प्लेहाउस दुवै छन्। यस भवनको लागि डिजाइन पनि कला हो, र यसले 1989को आर्किटेक्ट सम्मान सम्मान जीता।
कलाकृति अदालत एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय
एरिज़ोना स्टेट यूनिभर्सिटी मा कलाकृति अदालत (विस्तार गर्न को लागी फोटो क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: robynspix / फ्लिकर
आर्टिस कोर्ट ईटाईको भाग र ईन्जिनियरिङ् को आईरा ए फल्टन स्कूल हो। कलाकृति अदालतमा कम्प्युटिंग, सूचना विज्ञान र निर्णय सिस्टम्स इन्जिनियरिङका लागि राज्य-का-कला क्लासरूमहरू छन्, सबै लामो दूरीको शिक्षा सिकाउने क्षमताहरू।
ASU संगीत भवन
ASU संगीत भवन (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
एएसयू स्कूल म्यूजिक म्युजिक इमारतमा रहन्छ, जुन "जन्मदिन केक इमारत" को रूप मा एएसयू विद्यार्थीहरु द्वारा चिनिन्छ। इमारतले क्लासरूमहरू, अभ्यास कक्षहरू र रेसिटल हलहरू, साथै एभिलिन स्मिथ म्यूजिक थियेटर, रफेल मेन्डेज लाइब्रेरी संग्रहालय, कटिन कन्सर्ट हल, र संगीत रिसर्च सुविधाको चकलेट पूर्ण छ। यसको अतिरिक्त, संगीत बिल्डिंगमा संगीत शिक्षा र थेरेपी प्रयोगशालाहरू, इलेक्ट्रोनिक संगीत स्टुडियोहरू, पियानो मरम्मत पसलहरू, र एक पोशाक पसल छ।
एरिजोना राज्य मा बैरेट हामर्स कलेज
एरिजोना राज्य मा बैरेट हामर्स कलेज (विस्तार गर्न फोटो मा क्लिक गर्नुहोस)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
बार्रेट सम्मान सम्मान शैक्षणिक कम्प्लेक्स एएसयू सम्मानका विद्यार्थीहरूको लागि एक नौ-एकक क्याम्पस भित्र भित्र a-campus हो। यो देशमा शीर्ष स्थानमा रहेको सार्वजनिक विश्वविद्यालय भित्र मात्र आवासीय, चार वर्षको कलेज हो, र यसमा एक सामुदायिक केन्द्र, क्याफे, एक फिटनेस सेन्टर, र ब्यारेटमा स्थिरता हाउस समावेश छ।
Wells Fargo Arena मा ASU
वेल्स फर्ग एरेना ASU मा (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: निक बास्टियन / फ्लिकर
1974 मा निर्मित, वेल्स फर्ग एरेना धेरै एएसयूको एथलेटिक टोलीको घर हो। एएसयू सन डेल्स NCAA डिभीजन प्यासिफिक -12 सम्मेलन (पीएसी -12) मा प्रतिस्पर्धा गर्दछ, र 20 NCAA च्याम्पियनशिपहरू ( के हो एक शैतानको के हो? )। वेल्स फर्ग एरेना 14,000 देखि अधिक सीटहरु र एथलेटिक्स को अतिरिक्त मेजबान शो, कन्सर्ट, र स्नातक समारोह को सुविधा प्रदान गर्दछ।
ASU सूर्य शैतान स्टेडियम
ASU सूर्य शैतान स्टेडियम (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: निक बास्टियन / फ्लिकर
ASU सूर्य शैतान स्टेडियम 75,000 मान्छे पकड्न सक्छ र चार पटक पुनर्स्थापित गरिएको छ। स्टेडियम 2008 इन्टलाइट बाउल र 1 996एनएफएल सुपर बाउल को मेजबान थियो। 2008 मा, स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड एएसयू को शीर्ष "एथलेटिक डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट," ले धेरै छात्र एथलीटों को लागि विश्वविद्यालय बनाइयो।
"आत्मा" मूर्तिकला र एएसयू केयरी स्कूल अफ बिजनेस
"आत्मा" मूर्तिकला र एएसयू केरी स्कूल अफ बिजन (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: सेसिलिया बीच
बाहिरको डब्ल्यूपी केरी स्कूलको "खैर", "बेक McCain" द्वारा बनाइएको सुन्दर मूर्तिकला छ। सन् 19200 मा क्यारियर स्कूल अफ बिजनको कलाको 14-फुटर-उच्च काम र एएसयूको व्यापक कला संग्रहको अंश बनेको छ। "आत्मा" एएसयू समुदायको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उभिएको छ। तपाईं Spirit of Enterprise Center वेबसाइटमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
एरिजोना राज्य प्रोफाइल
GPA, ASU प्रवेश को लागि एसट र एक्ट ग्राफ
पीएसी 12 सम्मेलन
शीर्ष महाविद्यालय र पहाड राज्यका विश्वविद्यालयहरू
अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू अन्वेषण गर्नुहोस्:
UCLA फोटो टूर
युएनसी चैपल हिल फोटो टूर
फ्लोरिडा विश्वविद्यालय फोटो टूर
ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी फोटो टूर
थप तस्वीर भ्रमणहरू ...
संयुक्त राज्यमा सबैभन्दा सुन्दर कलेज परिसर
बोस्टन विश्वविद्यालय फोटो टूर
वर्जीनिया वर्जीनिया फोटो टूर
Towson विश्वविद्यालय फोटो टूर
हार्वर्ड विश्वविद्यालय फोटो टूर
विश्वविद्यालय क्यालिफोर्निया सांता बारबरा फोटो टूर
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय फोटो टुर अफ विद्यार्थी जीवन सुविधाहरू
वर्जीनिया टेक फोटो टूर
पैसाहरू छलफल गर्न प्रयोग गरिएका शब्दहरू
Wimpy Kid मूवी डायरी
कसरी बुलबुले बनाउने पप नगर्नुहोस्
9 एल्बमहरूले प्रभाव पारेको छ ((कस्तो छ कथा) बिहान महिमा? '
सन्तुलित वाक्य कसरी बनाउने
Waltz Jumps को मूलभूत कुरा सिक्नुहोस्
क्याथोलिक चर्चको सात Sacraments
"रूगिरग" को लागि फ्रांसीसी भेदभाव सिक्नुहोस् (ब्लशमा)
शीर्ष 10 हांगकांग एक्शन फ्लिक्स
येशू येरुसकी छोरीलाई निको पार्नुहुन्छ (मर्कूस 5: 35-43)
उत्कृष्ट क्रिश्चियन आईफोन र आईप्याड अनुप्रयोगहरू
Cuál es la diferencia en Universe en un college en EEUU
आमाबाबुले प्रोफेसर गाइड र Homeschooling को सहज
युरोपेली टूरमा Nordea Masters गोल्फ टूर्नामेंट
भारतमा ब्रिटिश राज
दृश्य शब्दकोश - प्रोफेशनल
रंगीन ग्लास रसायन विज्ञान
सादा र विमान
सयौं चार्ट सिकाउँदा गिनती, स्थान मान, र गुण छोड्नुहोस्
लेखन र भाषणमा एक्सिसिस के हो?
विश्वविद्यालय क्यालिफोर्निया लस एन्जलस फोटो टूर